Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment भिजिट भिसा सकिएकालाई दुई विकल्प : एक महिनाभित्र यूएई छाड्ने कि भिसा थप्ने ? - Pnpkhabar.com
भिजिट भिसा सकिएकालाई दुई विकल्प : एक महिनाभित्र यूएई छाड्ने कि भिसा थप्ने ?
एजेन्सी, २ साउन : यूएईका लागि भिजिट भिसामा गएकाहरुलाई दुई विकल्प दिइको छ । भिजिट भिसाको अवधि सकिएको छ भने अब कि एक महिनाभित्र यूएई छाड्नपर्छ, कि त एक महिनाका लागि नयाँ भिसा लिनुपर्ने छ ।
भिजिट भिसा सकिएको भए यूएईले ११ अगष्टसम्म देश छाड्न, कि त नयाँ भिसाको लागि एप्लाई गर्न भनेको छ । यूएईले एक महिनाको ग्रेस अवधि दिएको छ । भिजिटरलाई जुलाई १२ देखि अगष्ट ११ सम्म सम्बन्धित देश फर्कंदा कुनै जरिवाना लाग्दैन ।
तर, उनीहरुले अगष्ट ११ पछि पनि एक महिना ग्रेस पिरियड थप गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि भने जरिवानाबाट बच्नका लागि भए पनि देश छाड्नुपर्ने हुन्छ । यूएईले कोरोनाको कारण यसअघि लागू गरेको भिसा सम्बन्धी नियम खारेज गर्दै नयाँ निमय लागू गरेको हो ।
नयाँ नियम जुलाई १२ देखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ । कोरोनाको कारण यूएईले यसअघि ३१ डिसेम्बर २०२० सम्मको लागि सबै किसिमका (रेसिडेन्स, भिजिट, टुरिस्ट) भिसा अवधि बढाउने भनिएको नियम खारेज गर्दै नयाँ नियम ल्याएको यूएईका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
नयाँ नियम अनुसार मार्च र अप्रिल महिनामा भिसा अवधि सकिएकाहरुले जुलाई १२ देखि १ महिनाभित्र नयाँ भिसा लगाइ सक्नुपर्ने या अगष्ट ११ सम्म यूएई छाड्न पर्ने जनाइएको छ । जुन १ देखि जुलाई ११ सम्ममा भिसाको अवधि सकिएकाले सेप्टेम्बर १० देखि एक महिनाभित्र नयाँ भिसा लिनु पर्नेछ ।
जुलाई ११ भन्दा पछि भिसाको म्याद सकिएकाले भने पहिलेकै नियम अनुसार नयाँ भिसाका लागि प्रक्रिया गर्नुपर्ने यूएई सरकारले जनाएको छ । यूएईभन्दा बाहिर रहेका भिसाको अवधि सकिएकाहरुले नियमित उडान सुरु भएको एक महिनाभित्र यूएई गएर नयाँ भिसा लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
बिदामा यूएईभन्दा बाहिर रहेका तर कोरोनाको कारण फर्कनुपर्ने समयमा फर्कने नसकेकाको हकमा भने दुई देशबीच उडान सुरु भएको एक महिनाको अवधिलाई ग्रेस अवधि भनेर दिएको छ ।